१६ सचिवको सरुवा : आधाले चिठी बुझे, बाँकीको अझै अनिश्चित ! « प्रशासन
१६ सचिवको सरुवा : आधाले चिठी बुझे, बाँकीको अझै अनिश्चित !
काठमाडौँ । सरकारले दर्जन बढी सचिवको सरुवा गरेको छ ।
सिंहदरवार प्रशासन उच्च स्रोतका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव सुरेश कुमार अधिकारीको निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा सरुवा भएको छ । अधिकारीको ठाउँमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव तोयम राया गएका छन् ।
आजै मात्र सरकारले तीन वर्षका उपलब्धि सार्वजनिक गरिरहँदा स्थायी सरकारसमेत भनिने र सरकार सफलताको मुख्य कडी मानिने निजामतीको नेतृत्व चयनमा भने नराम्ररी चुकेको देखिन्छ । दुइ-चार महिनामै सचिव सरुवा यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो । जुन कुनै पनि नेतृत्वलाई सङ्गठन बुझ्न कम्तीमा पनि तीनदेखि ६ महिना लाग्छ तर बुझ्न नपाउँदै सरुवा गर्दा कसरी परिणाम ल्याउन सकिन्छ ? र कस्तो नतिजा ल्याउन खोजेका हुन्, त्यो पनि बुझी नसक्नुको छ ।
Tags : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालय सचिव सरुवा